अजंगका खुकुरी ! लिने हो तस्बिर ? « Drishti News
अजंगका खुकुरी ! लिने हो तस्बिर ?
Published On : 12 April, 2019
बागलुङ, २९ चैत । जारी चैत्राष्टमी मेलास्थल छिर्नासाथ दायाँपट्टी घरेलु हातहतियार र औजारको बिक्रीकक्ष भेटिन्छ । स्थानीय सीपबाट बनेका हँसिया, बञ्चरोदेखि ३० किलोसम्मको खुकरी बिक्रीमा राखिएको छ ।
मेला भर्न जाने जोकोही एकपटक सो बिक्रीकक्षमा पुग्छन् । देख्दै अजंगका खुकुरीले अवलोकनकर्तालाई लोभ्याउने गर्छ । एउटा ३० किलो र अर्को २२ किलो तौलको खुकुरी बिक्रीमा छ । पहिलोको मूल्य रु एक लाख ११ हजार १११ र अर्कोको रु ९९ हजार ९९९ तोकिएको छ ।
ठूला खुकुरी किन्ने भन्दा हेर्ने धेरै भएपछि कालिगड मनबहादुर विकले नयाँ जुक्ति निकाल्नुभएको छ । अवलोकनकर्तालाई खुकुरीसँग तस्वीर खिच्न लगाउने र पैसा लिने । तस्वीर लिएवापत एक जनाबाट रु २० लिने गरेको विकले बताए ।
बिक्रीकक्षअघि कसैले खुकुरी समातेर त कसैले उचालेर तस्वीर लिइरहेका हुन्छन् । आफूभन्दा अग्ला खुकुरीसँग रुचिपूर्वक तस्वीर लिने र खुकुरीबारे सोधखोज गर्नेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । कालिगड विकलाई खुकुरीबारे भन्दैमा फुर्सद छैन ।
ठूला खुकुरीले आकर्षित गरेपछि बिक्रीकक्षबाट साना खकुरी र अन्य औजारको बिक्री बढ्ने गरेको उहाँको अनुभव छ । ठाउँठाउँमा हुने मेला, महोत्सवमा उनले यसरी नै बिक्रीकक्ष राख्ने गरेका छन् ।
बागलुङको बुर्तिबाङ बजारमा ‘बुर्तिबाङ आरन व्यवसाय सेवा’ सञ्चालन गर्दै आउनुभएका विक १३ वर्षको उमेरदेखि कालिगडी पेशामा गर्छन् । ‘मेला, महोत्सव हुँदा ‘स्टल’ राख्छौँ’ उनले भने, ‘एउटा महोत्सवमा जाँदा रु एक लाख जति कमाइ हुन्छ ।’
यहाँको मेलामा भने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले निःशुल्क बिक्री कक्ष राख्ने व्यवस्था मिलाएको कालिगड विकले बताए । घरेलु सीप र प्रविधिबाट बनेका सामग्री भएकाले उनले राखेको बिक्रीकक्ष मेलाको आकर्षण बनेको हो । ठूला र महँगा खुकुरी विशेष माग आउँदा मात्र बनाएर बेच्ने गरेको कालिगड विकले बताए । फलामलाई आरनमा गालेर, घनले पिटेर खुकुरीको रुप दिन कडा मेहेनत लागेको उनको अनुभव छ । ३० किलो तौलको खुकुरी आठ दिनमा तयार भएको थियो ।
विकलाई व्यवसायमा श्रीमती सरीताको पनि दरिलो साथ छ । मेला, महोत्सवमा आफ्नो उत्पादन लिएर जाँदा विक दम्पतीसँगै जान्छन् । विकको आरन व्यवसायमा अन्य छ कालिगडले रोजगारी पाएका छन् । विकका बुबा पदमबहादुर विक पनि अझै गाउँमा आरन पेशा गर्छन् । पुख्र्यौली घर ढोरपाटन नगरपालिका–६ अधिकारीचौर भए पनि मनबहादुरले आरनकै कमाइबाट बुर्तिबाङमा घरघडेरी जोडेका छन् । रासस
उनका दुई छोरा र दुई छोरी अहिले पढाइमा छन् । आफ्नो पुख्र्यौली सीप र पेशालाई सम्मानपूर्वक अँगालेर विक सफल भएका छन् । बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित मेलामा स्थानीय उत्पादनको किनबेच भइरहेको छ । बागलुङको पहिचानको रूपमा चिनिने डालाडाली, नाङ्ला र ठेकाठेकी बेच्न गाउँका व्यापारी मेलामा झरेका छन् ।